Efa vonona i Kenya ho toerana vaovao amin'ny fivoriamben'ny UNWTO 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Efa vonona i Kenya ho toerana vaovao amin'ny fivoriamben'ny UNWTO 2021
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Kenya Breaking News • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Kenya dia mametraka fironana sy fitarihana vaovao amin'ny fizahan-tany manerantany miverina amin'ny COVID.
Ny Hon. Tsy nandany minitra iray akory i Najib Balala rehefa nanasa ny tontolon'ny fizahan-tany hanao ny fivorian'ny UNWTO General General izay hatao any Kenya.
Anjaran'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili izao ny milaza eny tsy misy hatak'andro.
Niandry ny sabotsy ny UNWTO vao nampahafantatra ny mpikambana. Nafindra avy any Maraoka ho any Espaina ny fivoriambe ho avy.
Ny Alahady ny Hon. Najib Balala, sekretera ny fizahan-tany ho an'ny Kenya dia nanasa ny World Tourism Organization (UNWTO) sy ny mpikambana ao aminy hanao ny fivoriamben'ny vondrom-paritra ho avy izao any Kenya.
Maraoka no toerana voalohany ary nofoanana tamin'ny herinandro lasa teo noho ny ahiahy COVID.
Lohalaharana amin'ny fizahantany any Afrika hatrany i Kenya, ary ankoatra ny fametrahana ny feo sy ny fironana ho an'ny kaontinanta sy any ivelany.
Ny Sabotsy ny Hon. Najib Balala, sekretera ny fizahantany ho an'ny firenena atsinanan'i Afrika Atsinanana dia nampandrenesin'ny UNWTO momba ny Nofoanana tany Maraoka ny fivoriamben'ny UNWTO nandrasana hatry ny ela noho ny ahiahy momba ny fiarovana COVID ary nifindra tany Espaina, ny foiben'ny fikambanana.
Rehefa nivoaka tamin'ity faran'ny herinandro ity ny Sekretariat UNWTO dia nanjary sehatra be mpampiasa ny minisitry ny fizahantany sy ny mpitarika ny fizahantany ny WhatsApp.
Nisy lobby mpanohana napetraka niaraka tamin'ny sidina. Tsy naharesy lahatra an'i Najib Balala, sekretera momba ny fizahantany efa ela niasana tany Kenya ny hanana io olana io.
Rehefa voafidy ho toerana hanaovana ny fivoriamben'ny UNWTO tany Saint-Pétersbourg, Rosia i Maraoka, dia nifaninana tamin'i Kenya sy Filipina izany.
Vonona handray ireo solontena ao amin'ny Antenimieram-panjakanan'ny fizahan-tany manerantany faha-24 mankany Kenya manomboka ny 30 Novambra ka hatramin'ny 3 Desambra 2021 ny Maherifo momba ny fizahantany eran-tany.
Ny alahady alina, hoy ny minisitra iray tsy nahita tory Balala eTurboNews: “Vao avy nanoratra ny taratasy manasa ny UNWTO hanao ny fivoriambe faha-24 eto amin’ny Magical Kenya aho.”
Tamin'ny minitra nanaovany ny fihodinana, dia nankasitrahan'izao tontolo izao ity hetsika ity.
Cuthbert Ncube, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny fizahan-tany afrikanina dia naneho hevitra momba ity fivoarana ity, ny faharoa niaingany tany Johannesburg tamin'ny sidina Ethiopian Airlines taorian'ny diany farany tany Etiopia.
“Ny Abirao fizahan-tany frantsay manohana tanteraka ity hetsika ity amin'ny fo manontolo.
Ny Hon. Najib Balala dia namana tsara amin'ny ATB ary mpitarika fizahan-tany tsy iadian-kevitra any Afrika sy any ivelany. Tiako ny miarahaba an'Andriamatoa Balala noho ny fahitany ary manentana an'i Hon. Ny sekretera UNWTO, Zurab Pololikashvili, dia manohana an'io fangatahana malala-tanana io, ka i Kenya, ny sisa any Afrika, ary izao tontolo izao dia afaka miara-miasa mba hahatonga ny fivoriana faha-24 an'ny UNWTO General Assembly ho fivoriambe tsara indrindra hatramin'izay. Azo antoka fa manana lanja lehibe ho an'ny hoavin'ny fizahantany. Mila mpitarika isika rehetra ary manaiky ny fomba hivoahana amin'ity krizy ity ary hamerenana ny sehatra. ”
The Tambajotra fizahan-tany manerantany misolo tena ny sampan-draharaham-pizahantany any amin'ny firenena 128 mahery dia manohana mafy ny fampiantranoan'i Kenya ny Fivoriamben'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany an'ny Firenena Mikambana.
Dr. Peter Tarlow, izay filohan'ny World Tourism Network, dia nanamarika ny maha-zava-dehibe ny fampifangaroana ny fizahan-tany sy ny pan-globalisme ary nilaza fa ny fampiantranoana Kenya ny fivoriambe lehibe toy izany dia manondro dingana vaovao sy mahomby amin'ny fizahan-tany manerantany.
Amin'ny maha-fikambanana iraisam-pirenena azy, ilaina ny fivorian'ny fizahan-tany manerantany ary ny fampiantranoana toy izany dia hanasongadinana ny Kaontinanta Afrikana, indrindra ny Afrika Atsinanana, ary hanome tosika fanampiny ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fizahan-tany manerana an'i Afrika.
Ny World Tourism Network dia manohana mafy ny hevitra fa ny firenena manerantany dia tokony hanana fotoana mitovy handray fivoriambe lehibe. Ity fomba fiasa manerantany ity dia mandika ny hevitry ny Firenena Mikambana ho zava-misy miasa.
Rehefa nanapa-kevitra ny hanafoanana ny hetsika i Morocco tamin'ny 15 Oktobra, dia nampahafantarin'ny UNWTO tamin'ny mpikambana tsara tao anatin'ny 3 andro ny 18 Oktobra ny momba ny General Assembly izay hatao ao Madrid, foiben'ny UNWTO.
Miaraka amin'ny tolotra malala-tanana nataon'i Kenya, hanaja ny ezaka naroson'i Morocco tamin'ity hetsika ity izy ary hamela ny fivoriamben'ny vondrom-paritra hijanona ao Afrika araka ny kasaina hatao.
Marihina, fa ny filankevitra mpanatanteraka dia nametraka ny feon'ny fivoriana farany tany GA dia tany Madrid. Ny toerana hanaovana ireo hetsika roa ireo dia tsy mbola tao amin'ny tanàna iray ihany.
Ny vahoaka izao dia mijery ny fitarihan'ny UNWTO manaiky tsy misy hatak'andro ny fangatahan'i Kenya.